Sirdoonka Itoobiya oo helay macluumaad sheegaya weeraro Argagixiso oo lala eeganayo Adis Ababa – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2013 3:11 b 0
Adis Ababa, November 6, 2013 – Dowladda Itoobiya ayaa heshay macluumaad muujinaya in ururka Al-shabaab ee Soomaaliya ay damacsan yihiin inay weeraro argagixiso ka fuliyaan dalkaas, waxaa haatan heegan la geliyey ciidamo kala duwan.
Qoraal ka soo baxay dowladda Itoobiya ayaa lagu sheegay in la arkay macluumad muujinaya in ay ururku weeraro abaabulayaan, sidaas daraadeed waxaa heegan la geliyey ciidamada, gaar ahaan kuwa booliska oo ay shaqada ugu badan u taalo.
?Argagixisada iyo Al-shabaab ayaa doonaya in ay weeraro ka geystaan Adis Ababa iyo deegaano kale oo ka tirsan dalka, xogtaas waa la helay waxaana ka gelaynaa heegan.? Ayey si wadajir ah u sheegeen hay?ada sirdoonka Itoobiya ee NISS iyo booliska federaalka.
TV-ga dalka Itoobiya, oo warka laga akhriyey waxaa uu sheegay in laamaha amaanka heegan la geliyey.
Itoobiya waxaa ay si kulul u eedaysay dalka Ereteria oo ay sheegeen in ay hubiyeen isla markaasna taageero u fidiyaan jabhadaha cadowga ku ah dalka Itoobiya iyo kooxda Al-shabaab intaba, qoraalka Itoobiya ayaa sidaas lagu sheegay.